Han weyn iyo hibo yar! – Kaasho Maanka
Labadaas nooc oo ah ereyada aynu lahayn haddana aynu ku darsannay kuwii la macnaha ahaa ee carabiga ahaa iyo kuwa magacyada alaabada u badan oo aynaan horay u aqoon waxaa weheliya ereyo aynu iska xoornay markii ay inagala qurxoonaadeen kuwa carabi ahi.
Malaha iyo shakiga waxaa laga yaabaa in aysan nooleyaasha aan dadka ahayni lahayn, ee ay wax kasta oo ay la kulmaan aragti ay ku qancaan ka qaataan, oo aysan tuhum badnayn. Sidaas darteed ayey dadnimadu ku jirtaa in wax kasta loo maleeyo siyaalo kala duwan, oo la fisho in ay dhici karaan malaayiin siyaalood oo suurtagal ahi, ee aan ”Waa xaqiiq!” lala soo boodin.
Xillligii kacaanka ayaa waxaa silic loo dilay Muuse Bootaan Cilmi-Gurey. Markii soomaalida loo soo sheegay in Muuse sidii loo jirdilayey ay naftii ka baxday ayaa waxaa gabayo ciilqab, tiiraayo iyo murugo xanbaarsan tiriyey rag meelo kala duwan joogeyn oo u qaadan waayey in ummadda laga diley Muuse iyo dad la mid ahaa, waxaana raggii qarracankaas ka maansooday ka mid ahaa Khaliif shiikh Maxamuud oo yiri:
QORMO LA XIRIIRTA: Adeegsiga caqliga iyo akhriska xorta ah
Dumarka badankoodu markii ay marqaamaan sirohooda oo dhan bay bannaanka keenaan oo xataa cawradooda dadka ay la qayilayaan kama ay asturtaan. Sidaas darteed waa in ay haweenku qaadka iska daayaan ama ay qol cidlo ah keligood ku qayilaan.
Qabrigii Alle ha u naxariisto ee Maxamed Ibraahim Cigaal waa in sanad walba kun sabeenood lagu dulqalaa, maxaa yeelay wuxuu ahaa hoggaamye ka fiican Daahir Riyaale Kaahin iyo Ismaaciil Cumar Geelle, oo labaduba lacagta ay helaan naftooda ugu raaxaysta, soomaalidana qaar qabyaalad u eega. Sabeenaha siyaarada ah waa in laga soo uruuriyaa dadka reer-miyiga ah ee ay marxuumka isku beesha yihiin.
Qoraalka noocaan ahi waa midka ugu xiiso liita qoraallada, laakiin waxaa laga yaabaa in uu faa’iidooyin waaweyn bulshada taro. Dadwenaha intooda badani waxay wax ku fahmaan qoraalka dabeecaddaas leh, waayo aadamiga badankoodu waxay ku nool yihiin in wax kasta farta loogu fiiqo, oo sida xoolihii loo dhaqdo.
Cali-Dhuux wuxuu lahaa sanqaroor dheerdheer oo aan kamas lahayn iyo timo sida yixda u jilicsanaa oo foodda hore ay bidaar yari waayadii danbe ka taabatay. Harreedadiisa madowgooda iyo wajigiisa casaankiisu sida habeenka iyo maalinta ayey u kala soocnaayeen, wuxuuna labada indhood oo ay birtoodu dhuxusha u egayd korkooda ku lahaa suuniyo sida shaarubkiisa khad la moodo. Labo garab oo kala fog iyo dhudhumo waaweyn buu lahaa, waxaana habeen iyo maalin sintiisa midig ku lammaansanayd toorrey saddexgees ah, gacanta midigna wuxuu ku sidan jirey waran teeri ah ama ul dhamas ah. Marka uu dadka fiirinayo wuxuu ka eegi jirey indhaha birtooda, mana uu libiqsan jirin jeer ay hadalka kala dhammaystaan, oo qofkii in uu been u sheego damcaa wuxuu ka argagaxi jirey labadiisa indhood oo sida seef galka laga siibey u naxdin badan. Markii uu qoslayo badanaaba afka ma uu kala qaadi jirin, wuxuuse dhoolocaddayn jirey markii ay gabar uu jecel yahayi la joogto.
Waxaan u malaynay in ay dabeecadda qoraalka ee noocaan ahi muujiso sawirro ku saabsan muuqaalka indhaha lagu dareemo iyo muuqaalka fahamka lagu garto sida dadnimada qofafka. Sidaa oo kale waxay dabeecaddaani abuuri kartaa taallooyin iyo muuqaallo ka duwan kuwa caadiga oo la yaqaan, sida qof afar gacmood iyo toddoba indhood leh.
Haddaba waxaa jira waqti kale oo ay sheekadu leedahay, oo ah xilligii ay dhacday sheekada la sheegayaa intii uu ahaa. Tusaale ahaan haddii laga sheekeeyo niman geel dhacay waxaa loo baahan yahay muddadii ay falkaas ku guda jireen intii ay ahayd. Ma hal maalin bay qisadu dhacaysey mase bil dhan bay qaadatay in wax la qorsheeyey oo lagu guulaystey?
Haddii meel uu dagaal ka dhaco oo qof dhibaato loo gaystey uu dabadeed qareen/abukaate yeesho wuxuu abukaatuhu qoraa oo maxkamadda tusaa sidii ay wax u dhaceen iyo hadal aan qisada dhacdadeeda khusayn ee uu asagu ku doodayo, iyo weliba sharraxaad kale oo ku saabsan meeshii ay wax ka dhaceen iyo dadkii falka geystey sidii ay u ekaayeen. Haddaba qoraalkaas uu qareenku diyaariyey muxuu yahay, sidee buuse u waafaqsan yahay dabeecadihii qoraalka oo saddexda ahaa ee aynu xoogaa yar ka soo taabannay?
Dhibaatada hadda ina haysaa waa abukaatuhu ma hal-abuur buu keenay? Inta aynaan qareenka tiisa gelin ayeynu dhinac dhigaynaa in ay dalalka galbeedka ku badan yihiin dad qora taariikhda noloshooda oo si qurxoon inta u diyaariya ugu soo caanbaxa si daran, oo buugta sidaas ah aad looga gato. Kuwaas laftoodu ma waxay sameeyeen hal-abuur?
Waxaa kale oo jira dad badan oo taariikhaha caadiga ah jaamacad kaga baxay, oo ay markaas dadkaas badan qaarkood qoraallo fiicfiican ka sameeyaan maaddada taariikhda. Haddaba dadka taariikhda ku takhasusay ama akhriskeeda xiiseeya in yar oo ka mid ah baa qori kara buug macaan oo taariikh ah, ee inta kale qoraal fiican ma ay diyaarin karaan. Marka kuwa taariikhdii ay barteen sida macaan u qori kara iyo kuwa yaqaan, laakiin aan qori karin ma waxaa kala reebay hal-abuurnimo?
Dadka saxaafadda ama waxyaalo kale bartay dhammaantooda ma ay diyaarin karaan maqaallo xiiso badan, oo waxaa laga yaabaa in uu dal sida USA weyn ka soo caanbaxo qof arrimaha caadiga ah maqaallada uu ka diyaariyo ay dad aad u badani ku xirmaan, oo il gaar ah lagu eego. Haddaba qofkaas laftiisa maxaa ka soocay kumanyaalka sanad walba ka qalinjebiya maaddada uu bartay?
Sawirradaasi waxay ahaan karaan dhacdooyin xiiso leh, waxayna ahaan karaan ereyo xiiso leh. Haddii aynu soomaalida dib ugu noqonno waxaa la wada yaqaan maanso, oo ah hadal ay dad gaar ahi si gooni ah u abuuraan, laakiin sida badan lagaga hadlo wax ay dadku wada og yihiin. In maansada lagu cabburiyo sawir la wada arkay iyo dhacdo la wada ogaa keli ah bay soomaalidu u badnayd, laakiin waxaan u maleeyey in ay jiraan dad maansooda oo sawirrada iyo dhacdooyinka laftooda iskood ula yimaada.
Dhacdooyin aan dhicin iyo sawirro aan la arag in nolosha caadiga ah laga soo miiro oo qalbiyada dadka lagu sixro ayaan u maleeyey in ay hal-abuurnimo tahay.
Sheeko xiiso leh oo dhacday ama taariikh si qurxoon loo diyaariyey waa aynu ka maaganey in aynu hal-abuur moodno. Haddaba haddii aynu helno labo buug oo uu mid ku saabsan yahay qof jira taariikhdiisii nolosha, midna uu yahay wax la abuuray ee aan dhicin oo hal-abuur ah maxaynu ku kala garanaynaa? Waa labo sheeko oo xiiso leh, ee maxaa lagu kala aqoonsan karaa?
Wuxuu go’aansaday in uu miskiin iska dhigo si aysan horay uga cayrin, ayaduna waxay ku hamidey in ay hadallo qallafsan ku tiraahdo si ay in uu daacad yahay u baarto. Dhawr goor buu in uu ka tago damcay haddana wuxuu ogaa in ay dumarku marka hore is waal-waalaan. Lafteedu aad bay u rabtey ee arrintu is qaaliyayn bay ka ahayd.
faker wa wxa umada somaliyeed oodhan kawda mqan in lafakro oo lgu dhaganaado wxa ay hesteen ama wxa lookeeeno
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 12th December 2003